Nepalistudio » राजरंगशाला जिर्ण अवस्थामा राजरंगशाला जिर्ण अवस्थामा – Nepalistudio
राजरंगशाला जिर्ण अवस्थामा
सप्तरीमा रहेको एक मात्र रंगशालाको अवस्था जिर्ण बन्दै गएको छ । समयमै सप्तरीको सदरमुकाममा रहेकोे राज रंगशाला आवश्यक मर्मत एवं संरक्षण हुन नस्कदा जिर्ण अवस्थामा पुगेका हुन ।
केहि वर्ष यता मर्मत तथा संरक्षणको अभाव हुँदा खेल मैदानमै पानी जमन थालेको छ । यसैगरि रंगशालाको वार भत्किदा अहिले गौचरणमा परिणत भएको स्थानीयले बताए ।
अहिले यसराज रंगशालामा कुनै पनि खेलकुद गतिविधि संचालन भएको छैन । खेलकुद गर्नु पर्यो भने राजबिराजको पबि माबिको खेलमैदानमा खेलकुद संचालन गर्दै आएको छ । पहिले पहिले स्थानीय स्तरका विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता हुँदै आएपनि उचित संरक्षण हुनसक्दा तथा पानीको निकास हुन न स्कदा खेल मैदानमा पानी जमिने समस्या वर्षै देखि झेल्दै आएको छ ।
अचेल खेल मैदानमा गौचरन बनेको छ भने यस रंगशालामा औद्योगिक मेला, सान्सकृतिक मेला र राजनीतिक दलका सभा गर्ने स्थलको रुपमा प्रयोग हुन थालेको छ । सात हजार दर्शक अटाउने क्षमता भएको प्याराफिट भत्किदा रेखदेख र मर्मत तथा सम्भारतर्फ सम्बन्धीत निकायले कुनै चासो देखाउन सकेको छैन् ।
त्यसैगरी बि. स. २०३६ सालमा तत्कालीन अञ्चलाधीश लक्ष्यबहादुर गुरुङ्गको पालामा निमार्ण भएको २ बिघा ७ कठा ४ धुर जग्गामा फैलिएको राजरंगशालाको अबस्थामा जिर्ण बन्दै गएको छ । यता विगत बीस वर्षदेखि दुई दर्जन परिवारले प्याराफिट अतिक्रमण गरेर बस्दै आएको छ् ।
समयमै उचित संरक्षण गर्न नसकेको राजबिराजको नामबाट नामाकरण गरिएको राजरंगशालाको रेखदेख र मर्मत तथा सम्भारतर्फ सम्बन्धीत निकायले चासो देखाउनु पर्ने देखिन्छ ।